इलामका द्वन्द्वपीडितलाई छ करोड राहत रकम वितरण
इलाम, साउन २
इलामका द्वन्द्वपीडितलाई यसपटक रू‍. छ करोड राहत वितरण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएकाका आफन्त र विस्थापित भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ताबापत रू‍. पाँच करोड ९० लाख ८९ हजार ९०० वितरण गरिएको हो ।
यसअघि पनि विभिन्न चरणमा पाँच लाख राहत पाएका द्वन्द्वपीडितका आफन्तलाई यसपाली एकमुष्ट रू‍. पाँच लाख थप गरेर रू‍. १० लाख राहत रकम पुर्‍याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बताए। एक सय १२ जना मृतकमध्ये एक सय आठ जनाको परिवारलाई रू‍. पाँच लाख र बाँकी चार जनाको परिवारलाई रू‍. एक लाख ५० हजारको दरले राहत वितरण गरिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको करीब एक दशकपछि द्वन्द्वपीडितले राहत रकम पाएका हुन् ।
स्थानीय शान्ति समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित १९३ जनाले रू‍. १० हजारदेखि २५ हजारसम्म गरी रू‍. २४ लाख ८९ हजार ९०० राहत पाएका छन् । बेपत्ताको सूचीमा रहेका चार जनाका आफन्तले रू‍. पाँच लाखको दरले रू‍. २० लाख राहत पाएका छन् ।
द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका तत्कालीन पुवामझुवा–८ का अगमसिंह राई, फाकफोक–१ का गोकुल निरौला, मङ्गलबारे–३ का कटकबहादुर साङपाङ र आमचोक–३ का शुक्रराज राईका परिवारले पाँच लाखका दरले राहत बुझेको समेत प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए । रासस
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २, २०७४, ०२:२८:०४
बागदरबार जोगाउन काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय अघि सम्पदा अभियन्ताले दिए धर्ना